Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » Ganacsigu wuxuu awoodaa maalinta labaad ee IMEX America
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Laba faa'iidooyin ganacsi oo xoog leh oo xoojinaya daabacaadda ugu dambeysay ee IMEX America, oo hadda ka socota Las Vegas.
Dabaqa bandhiga wuxuu ahaa goobta fursadaha ganacsi ee xiisaha leh.
Barashada bandhigga waxaa bilaabay hadal muhiim ah oo ku dhiirigeliyay daawadayaasha inay 'qallafsan yihiin'.
Barnaamijka waxbarasho ee dhamaystiran ee bandhigga (200+ fadhi) sidoo kale waa soo jiidasho wayn.
"Halkan joogitaanku waxay i siinaysaa faa'iidada inaan ka mid noqdo ciyaartayda ugu sareysa iyo inaan awood u yeesho inaan si wanagsan ugu adeego macaamiishayda." Iibsadaha martida loo yahay ee Linda Lawson, oo ka socda Achieve Dhiirrigelinta & Kulamada Ohio, waxay soo koobtaa laba faa'iidooyin ganacsi oo xoog leh oo xoojinaya daabacaaddii ugu dambeysay IMEX Ameerika, oo hadda ka dhacaysa Las Vegas.
Dabaqa bandhiga wuxuu ahaa goobta fursadaha ganacsi ee xiisaha leh sida Andrew Swanston, Madaxa Iibka, Shirarka & Dhacdooyinka ExCel London, wuxuu sharxayaa: "Waxaan haysanay maalin weyn shalay. Macmiil aanu xidhiidh la samaynaynay in ka badan 10 sano ayaa doortay IMEX Ameerika iyadoo ah meesha lagu xaqiijinayo dhacdo 6,000 oo ergo ah oo loogu talagalay urur caafimaad oo caalami ah sanadka 2022 - bandhiggu wuxuu ahaa fursadda ugu habboon ee lagula kulmo fool ka fool oo loo saxiixo heshiiska."
Laga soo bilaabo 'cilad-xumo' ilaa dabacsanaan
Barashada bandhigga waxaa bilaabay hadal muhiim ah oo ku dhiirigeliyay daawadayaasha inay 'qallafsan yihiin'. Hoggaanka dhijitaalka ah: Shanta caado ee guusha iyo farxadda qoraaga wax iibsada adduunka ee is-beddelaya, ahna afhayeenka dhiirrigelinta Erik Qualman ayaa ka hadlay sida ay dabacsanaantu u noqotay mid ka mid ah 'xoogagga cusub', gaar ahaan labadii sano ee la soo dhaafay: "Ku adkayso Meeshaada, laakiin u dabacsan dariiqaaga”, ayuu kula taliyay. Guruga dhijitaalka ah waxa kale oo uu ka hadlay sida wax looga qabto 'xogta, khalkhalgelinta iyo carqaladaynta' si loo qorsheeyo istaraatiijiyad dhijitaal ah dhacdo bixinaysa ka-qaybgal run ah: "Ku bilow dhoola cadeyn. Ka fakar waxa u soo saari doona dhoola cadeynta macmiilkaaga oo ka shaqayso jidkaaga halkaas.
Ka qaybqaadashada dhacdada wadista iyadoo la kala saarayo tirokoobyada dadka ayaa lagaga hadlay Aan soo afjarno takoorka dadka, fadhi uu sameeyay David Allison, aasaasaha Valuegraphics, xog-ururinta ugu horreysa ee caalami ah oo si gaar ah loo abuuray si ay uga caawiso ururrada inay saadaaliyaan oo saameyn ku yeeshaan habdhaqanka iyadoo la adeegsanayo qiyamka aan wadaagno. "Tirakoobyadu waxay qeexayaan waxa ay dadku yihiin, laakiin maaha sida loo hawlgeliyo," ayuu yidhi. Dhammaan qaybaha adduunka qiyamka ugu sarreeya ee dadku aad u daneeyaan waa Qoyska, Lahaanshaha, Xiriirka, Saaxiibtinimada iyo Bulshada - David wuxuu wadaagay sida loo isticmaalo qiyamkan muhiimka ah si loo gudbiyo fariimaha muhiimka ah.
IMEX Ameerika wuxuu hadda ka socdaa Mandalay Bay ilaa Noofambar 11.